लेखनाथमा अचम्मै भो ! बम आशंकाले साढे २ घण्टा राजमार्ग ठप्प (हेर्नुहोस् भिडियो) – BIG FM 101.2 MHz
Home » स्थानीय » लेखनाथमा अचम्मै भो ! बम आशंकाले साढे २ घण्टा राजमार्ग ठप्प (हेर्नुहोस् भिडियो)
लेखनाथमा अचम्मै भो ! बम आशंकाले साढे २ घण्टा राजमार्ग ठप्प (हेर्नुहोस् भिडियो)
रञ्जन अधिकारी पोखरा, २० मंसिर / मुलुकमा बम आतंक छ । चुनावमा अराजक समूह हावी हुनेमा जानकार रहँदा रहँदै गृह मन्त्रीलाई पदच्युत गरेर सुरक्षा संयन्त्र आफै सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहलकदमी लिन नसकेको गुनासो बढेको छ।
दिनदिनै बहालवाला मन्त्रीदेखि, उम्मेदवार बमको धरापमा परिरहेका छन्, एक म्यादी प्रहरीले प्रधानमन्त्रीकै सुरक्षार्थ खटिने क्रममा ज्यान दिईसके । कसले यस्तो हर्कत गरिरहेको छ ? सरकारबाट प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको भन्दै नागरिक अचम्मित छन् ।
यही भय र त्रासले पृथ्वीराजमार्गमा यात्रु बेकारमा साढे दुई घण्टा जाममा फस्नुपरेको छ । स्थानीय आतंकित भए । मंगलबार बिहानपख बसमा सवार कुनै यात्रुको कालो ब्याग सडकमै खसेछ ।
पोखरा लेखनाथ सैनिकबस्ती स्थित पोखरा विश्वविद्यालय जाने चोक नजिकै बिहानै स्थानीयले झोला देखेपछि बम आशंकामा सुरक्षानिकायलाई खबर गरे । आर्मीले बम डिस्पोजको प्रक्रिया पूरा गर्दा साढे दुई घण्टासम्म राजमार्ग ठप्प बन्यो ।
अन्तिममा कालो झोलाबाट निस्क्यो कपडा र किताब मात्रै । प्रहरीले बसबाट झरेको अनुमान गरेको छ । बम ठानेर नै झोलामा धमाका दिएपछि अन्तिममा कपडै कपडा र किताब भेटिएको हो ।